October 28, 2020 - Online Hartha
October 28, 2020 by Online Hartha
အရွက်ကို ဟင်းချိုချက်သောက်လျင် သွေးကျသည်။ အမူးအမော် ပြေစေသည်။ အရွက်ကို ကြက်သွန်ဖြူ ငရုတ်ကောင်းနှင့်ဟင်းချိုချက်သောက်ပါက ရာသီထိန်တတ်သောအမျိုးသမီးများ ဓမ္မတာမှန်စေသည်။ အပူလွန်ကဲသော ရောဂါများကိုနိုင်သည်။ ကျောပူရင်ပူ လည်ချောင်းပူ နှုတ်ခမ်းပူစသော အပူလွန်ကဲခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေသည်။ အရွက်နုများကို ကြော်စားပါက ယားနာပျောက်သည်။ အရွက် သတ္တုရည်ကို နို့နှင့်ရောသောက်လျှင်ဆီးရွင်စေသည်။ အရွက်ကို ငါးကြင်း၊ ကြက်သွန်နီဖြင့် ကြော်စားလျှင် လေသက်စေသည်။အရွက်ကို ပဒဲကော၊ ကြက်သွန်ဖြူ နှင့်ဟင်းချိုချက်သောက်ပါက ဓမ္မတာထိန်ခြင်းငုပ်ခြင်းကို သက်သာပျောက်ကင်းစေသည်။ အပွင့် ဒန့်သလွန်အပွင့်ကို ပုစွန်ခြောက်ဖြင့်သုပ်စားပါက အကြောဆိုင်းခြင်း၊ အကြောဆွဲခြင်း၊အကြောရမ်း၊ အကြောရောင်ခြင်းကိုသက်သာပျောက်ကင်းစေသည်။ အပွင့်ကို ထောပတ်၊ကြက်ဥနှင့် ကြော်စားလျင် ခွန်အားတိုးစေသည်။ အပွင့်ကို ဆိတ်သားနှင့် ကြော်စားပါကလေမဖြတ်နိုင်ပါ။ အပွင့်ကို ပရန္နဝါဥထောပတ်နှင့် ကြော်စားလျင် ကာမအားကို တိုးပွားစေသည်။ အပွင့်ကို နို့နှင့်ပေါင်းစားလျှင် သုက်အားကိုပေး၏။ အပွင့်ကို … Read more
သငျအိပျနတေဲ့ပုံစံကနေ သငျ့အကွောငျးကို မှနျအောငျပွောနိုငျတယျ….
သင်အိပ်နေတဲ့ပုံစံကနေ သင့်အကြောင်းကို မှန်အောင်ပြောနိုင်တယ်…. သင်အိပ်နေတဲ့ပုံစံကနေ သင့်အကြောင်းကို မှန်အောင်ပြောနိုင်တယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား။ ပုံမှာပါတဲ့အထဲက သင်ဘယ်လိုအိပ်တတ်လဲဆိုတာ ရွေးပြီး မှန်မမှန်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ ပုံစံ(၁)… တကယ်လို့သင်ဟာ ဒူးနှစ်ဖက်ကို ဘေးဘက်သို့ ကွေးပြီးအိပ်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ အေးဆေးပြီးတည်ငြိမ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကိုလွယ်လွယ်တိုက်ခိုက်လို့မရသလို၊ သင်ဟာ အနာဂတ်ကိုတွေးပြီး ကြောက်နေတတ်တဲ့သူမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ သင်ဟာ သင့်ဘဝမှာဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးပဲ ကြုံကြုံ အပြုံးမပျက်တဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ် ပုံစံ (၂)… တကယ်လို့သင်ဟာ ကွေးကွေးလေးအိပ်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ တစ်ခါတလေမှာ အားကိုးရှာတတ်တဲ့သူဖြစ်ပြီး သင့်အပေါ်မှာ ကြင်နာပြီး၊ မေတ္တာအပြည့်ပေးနိုင်တဲ့သူကို တောင့်တနေတတ် သူပါ။ နောက်ပြီး သင်ဟာ ပြသနာတွေအရှုပ်အထွေးတွေနဲ့ ခပ်ဝေးဝေးမှာနေချင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သင့်နဲ့အကိုက်ညီဆုံးကတော့ ပန်းချီ၊ အကနဲ့ စာရေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုံစံ (၃)… မှောက်ရက်အိပ်တတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ သင်ဟာခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ ဦးဆောင်နိုင်ပြီး တွန်းလှန်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိသူတစ်ယောက်ပါ။ သင်ဟာ အရာရာကို … Read more
မိသားစုဓါတ်ပုံလေးကိုကိုင်ပြီး ငိုနေတဲ့ ကိုရင်လေးရဲ့အဖြစ် လွမ်းတယ် အမေ နဖူးလေးစမ်းပြီးအပူတိုင်းတတ်တဲ့ အမေ့ ရဲ့လက်တစ်စုံကို လွမ်းတယ် ဘာစားချင်လည်းလို့ခဏခဏ မေးတဲ့ အမေ့ ရဲ့စကားသံလေးလေးကို လွမ်းတယ် လေစိမ်းတွေ ထွက်မခံပါနဲ့ဆိုတဲ့ အမေ့ ရဲ့သတိပေးသံလေးကိုလည်း လွမ်းတယ် ပူပူနွေးနွေးနဲ့အမေ့ လက်ရာဆန်ပြုတ်တစ်ခွက်ကိုလည်း လွမ်းတယ် ငယ်ဘဝ ငယ်ညတွေက အမေ နဲ့ပတ်သက်သမျှ အရာအားလုံးကိုလွမ်းတယ် အမေ အခုတော့ အမေ —— ဝေးတစ်မြေ နယ်တစ်ခြားက စာသင်သားတစ်ယောက်ဘဝရဲ့ အဖြစ်ကို အမေ သိလေမလား အမေ့ အမြင်မှာ မသိသာပေမယ့် သား ရင်မှာ အထိနာခဲ့ရသူပါ အမေ မိုးထိလို့အဖျားမိနေပေမယ့် မရပ်နားနိုင် ဆွမ်းထွက်ရပြန်တယ် အမေ သဒ္ဓါဆွမ်းမရပ်ရင် တစ်ထွာဝမ်းငတ်တဲ့အဖြစ် အမေ သိလေမလား ဝိကာလနေအလွဲမှာ လူတကာလို စားသောက်ပိုင်ခွင့်ကမရှိ … Read more
အမျိုးသမီးတွေကြားမှာ ယခုခေတ်မှာ ခေတ်စားလာတဲ့အလေ့အထတွေထဲ ကတစ်ခုက အသားအရေလှပဖို့ ခန္ဓာကိုယ်ကျစ်လစ်ကျန်းမာဖို့ အစားအသောက်တွေကို ရွေးချယ်ပြီး စားသောက်လာကြတာပါ။ အစားအသောက် အသီးအနှံအမျိုးမျိုးထဲကမှ ကျွန်မနှစ်သက်တဲ့ ဖျော်ရည်လေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ မြန်မာတွေအတွက်တော့ သိပ်ပြီး မထူးဆန်းတဲ့ အပင်ပါ။ ချဉ်ပေါင်ပင်ရဲ့ရင့်မှည့်လာတဲ့ အသီး/အဖူးခွံ (sepals of roselle) ဖြစ်ပါတယ်။လူအများနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ သင့်ကို လက်ခံဖို့ ချစ်ခင်ဖို့ ဆိုတာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်- မလိုအပ်ဘူးထင်ပြီး သင့် ရဲ့ဆက်ဆံပုံ ဆက်ဆံနည်းလွဲမှားသွားခဲ့ရင်တော့ သင် မိတ်ပျက်ပါပြီ- ဒါကြောင့် ဒီ ဗီဒီယိုလေးကိုသာ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်လိုက်ပါ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ချဉ်ပေါင်ရွက်ကို ကျွန်မတို့ မြန်မာတွေကတော့ ဟင်းအဖြစ် အမျိုးမျိုးချက်စားတတ်ကြပါတယ်။ ချဉ်ပေါင်ဖူးကိုတော့ ယိုအဖြစ်သာ အများဆုံးစားလေ့ရှိပါတယ်။၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ကိုးရီးယားနိုင်ငံက စာတမ်းဖတ်ပွဲဖိတ်လို့ သွားရတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ … Read more
ဖုနျးသုံးသူတုိုငျးသိထားသငျ့တဲ့ စမတျဖုနျးတှရေဲ့ လြှို့ ဝှကျခကျြ ( ၁၃ ) ခု
ဒီလှည့်ကွက်လေးတွေလုပ်ဖို့သင်လိုအပ်တာကတော့ အိမ်မှာရှိနေကျပစ္စည်းလေးတွေ၊ သုံးနေကျပစ္စည်းလေးတွေ နဲ့ လက်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလေးပဲလိုပါတယ်။ ၁။ဖုန်းကညစ်တံ(pen)ကိုသုံးမယ့်အစားဓာတ်ခဲကိုအသုံးပြုပါ ဓာတ်ခဲဟာဆိုရင် ကညစ်တံထက်ပိုကောင်းတဲ့အခြားနည်းလမ်းပါ။ ဒါအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုလဲစမ်းသပ်ပီးပါပီ။ ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကို ဓာတ်ခဲ့ရဲ့ အနုတ်ဘက်နဲ့ထိပေးရုံပါပဲ။ ၂ ။ စာရွက်ညှပ်ကလစ်ကိုသုံးပီး ဖုန်းထောင်ထားလို့ရအောင်လုပ်မယ်။ စမတ်ဖုန်းတွေဟာ ဖြေထားတဲ့စာရွက်ညှပ်ကလစ်ပေါ်မှာ သိပ်ကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ဖုန်းလဲကျမှာမစိုးရိမ်ရပဲဗီဒီယိုတွေကြည့်နိုင်ပီပေါ့။ ၃။ လက်ချောင်းမှာအလူမီယမ်အပြားကပ်ထားပါ ဒီလှည့်ကွက်လေးကိုတော့ ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကတုန့်ပြန်မှုမရှိတဲ့အခါ၊ သင်လက်အိတ်လဲဝတ်ထားမယ်ဆိုရင် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလှည့်ကွက်ကတကယ်ကိုအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းပြန်ဖြေဖို့၊ စာရိုက်ဖို့အတွက်ဆိုပီး လက်အိတ်ကိုလဲချွတ်စရာမလိုပါဘူး။ ၄။ အညစ်အကြေးတွေ၊ ဖုန်တွေရှင်းလင်းဖို့ ဆေးထိုးအပ်ကိုအသုံးပြုပါ။ ဒီနည်းလမ်းကိုစမ်းသပ်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါမဲ့ အပေါက်လေးတွေထဲကို လေသွင်းထည့်ပီးတဲ့အခါမှာ ဘာမှပြောင်းလဲသွားတာကိုမတွေ့ရပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီလှည့်ကွက်ဟာဆိုရင်တော့ သင့်ဖုန်းကိုပိုပီးမသန့်ရှင်းသွားစေပါဘူး။ ၅။ပူဖောင်းကနေဖုန်းထည့်တဲ့ case တစ်ခုလုပ်ပါ။ အရင်ဆုံးပူဖောင်းကိုမှုတ်ပါ။အရမ်းကြီးအောင်မှုတ်စရာမလိုပါဘူး။တစ်ဝက်လောက်ဆိုရပါပီ။ပီးရင် ဖုန်းကိုအဲ့ထဲကိုညှစ်ထည့်ပါ။ ဒါဆိုရင်အဆိုပါပူဖောင်းဟာဖုန်းကိုလက်အိတ်လိုပဲစွပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒီလှည့်ကွက်ဟာတကယ့်ကိုအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၆။ ဖုန်းမျက်နှာပြင်က အစင်းကြောင်း၊ခြစ်ရာတွေကို သွားတိုက်ဆေးနဲ့ရှင်းလင်းပါ ဒီလှည့်ကွက်ကအလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ သွားတိုက်ဆေးနဲ့မျက်နှာပြင်ကိုပွတ်တိုက်ခြင်းဟာ အစင်းကြောင်းတွေကိုပိုလို့တောင်ထင်သာမြင်သာဖြစ်စေပါတယ်။ ၇ ။ … Read more
ဒီ က နေ့ ခေတ်မှာ ဆံ ကေ သာ နဲ့ပတ် သတ်လို့ အ ဓိ က ရင်ဆိုင်နေရ တာ က တော့ ဆွံ ပင်ကျွတ်တာ၊ ဗောက်ထ တာ နဲ့ အရွယ်မတိုင် ခင် ဆံ ပင်တွေဖြူ လာ တာဖြစ်ပါ တယ်ဒီ အ တွက် အ လှ ကုန်ပစ္စည်း အ မျိုး မျိုး ကို ဝယ်သုံးေ ပမဲ့ တ ချို့ဗောက် ပျေက်တဲ့ ခေါင်းလျှော် ရည်ဆို ဆံ ပင်ကျွတ်တာ ဆံပင်ကျွတ်တာ ရပ်တဲ့ ခေါင်း လျှော်ရည်ကို ဗောက်ထ တာ အ ဆီပြန်တာ တွေ … Read more
အဘဦးဖိုးနီပြောတဲ့ လက်ဖဝါးပေါ်မှာ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် ဂမ္ဘီရကြက်ခြေ ပါသူများအကြောင်း…
ဒီမနက်လဲ နံနက် (၁-၀၀)လောက်မှာနိုးလာပါတယ်။ခါတိုင်းဆို ဘုရားကန်တော့သစ္စာပြုပြီး စာဖတ်၊ပြီးရင် တရားထိုင်ပြီးက ရေးခြင်တဲ့စာရေးတင်ပါတယ်။ပြီးရင်ပြန်လှဲပါတယ်။ဒီမနက်ကတော့ စာမဖတ်အားဘဲ ရေးခြင်ဖော်ပြခြင်နေတဲ့ကိစ္စ ရပ်လေး တစ်ခု ရှိနေပါတယ်။ ဒါကတော့ ငါးပါးသီလ လုံစွာနေထိုင်နေပေမဲ့ လောကဓံဒါဏ်ကို ခံနေရတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက်ပါ။ မနေ့ကတော့ ဘုရားစာတွေရွတ်ပေမဲ့ ဘဝမတိုးတက်သူတွေ အနှောင့်အရှက်ခံနေရသူတွေကို ပရိကံလိုအပ်ချက်ဖြန့်ဝေပေး ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီနေ့ကတော့ ငါးပါးသီလ လုံပါလျက်မပြည့်မစုံဖြစ်နေကြရသော မိတ်တွေအတွက်ပါ။စာတွေလိုက်ဖတ်တဲ့အခါမှာ ဂမ္ဘီရ ကြက်ခြေ ပါရင်အရာရာပြည့်စုံမယ် ကြီးပွားမယ်လို့ ရေးထားတာတွေ ဖတ်ရပါတယ်။သုတေသနအရ တဝက်မှန်တဝက်မှားပါတယ်လို့ကျွန်တော် အခိုင်အမာပြောပါ မယ်။ ဘာကြောင့်ပြောနိုင်သလဲဆိုရင်လက်ခဏာပညာရပ်ကို(၁၃)နှစ်သားကစတင်ရင်းနှီးပြီး ယနေ့အချိန်အထိ အဆက်မပြတ်သုတေ သနလုပ်ခဲ့လို့ပါဘဲ။ လက္ခဏာပညာရဲ့အားသာချက်က တွက်ချက်နေစရာဘာပစ္စည်းဘာအထောက်အကူမှမလိုဘဲလက်ကိုယူကြည့်တာနဲ့ ခြုံငုံပြော နိုင်ပါတယ်။မွေးနှစ် မွေးလ ရက်နေ့ဘာမှမလိုပါ။ လက်ခဏာနဲ့ အသေးစိတ်ကတော့ အတိုင်းအထွာ လိုပါတယ်။ဒါပေမဲဗေဒင် ပညာလောက်အနုမစိတ်နိုင်ပါဘူး။သယ်ဆောင်ရတဲ့ပစ္စည်း ပစ္စယတာဝန်နည်းပါတယ်။မျန်ဘီလူးတစ်ချပ်ပါရင်ရပါပြီ။ ဝန်ကျဉ်းပေမဲ့ဒီပညာလဲ မိမိမှာအတွေ့အကြုံ … Read more
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗန်ဒါပင် (ဗန်ဒါသီး) လို့ အလွယ် ခေါ်လေ့ရှိတာကြောင့် ဗာဒံပင် ဆိုတဲ့ သူ့မူလအမည် ပျောက်ကွယ်နေတာပါ။ အင်္ဂလိပ်အမည်ကIndian Almond ပါတဲ့။ ဗာဒံစေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီး၊ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေ ဘယ်လောက်တောင်များတယ် ဆိုတာသိနိုင်ကြပါစေရန် မျှဝေလိုက်ပါတယ်နော်။ ဗာဒံပင်က အကြီးမြန်ပြီး၊အရွက်တွေ ကလည်းတဆင့်ပြီးတဆင့် အတက်မြန်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရိပ်ရအပင်အဖြစ် စိုက် ပျိုးလေ့ရှိကြပါတယ်နော်။ ယနေ့ နိုင်ငံတကာမှာတော့ ဗာဒံစေ့နဲ့ ၎င်းမှရတဲ့အဆီကို တန်ဖိုးထား စားသုံးနေကြပါပြီနော်။ဗဟုသုတအနေဖြင့် ပြောရလျှင် ဂရိနိုင်ငံရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်တွေမှာဗာဒံစေ့ကို wedding sweets အဖြစ် အထူးတလည် ဧည့်ခံနေကြတာပါနော်။ အီရန်နိုင်ငံမှာတော့ NewYear ပါတီပွဲတို့လို ထူးထူးခြားခြားနှစ်ပတ်လည် ဧည့်ခံပွဲတွေမှာပင်လယ်မှ ဆားဖြ င့်အငံဖောက်ထားတဲ့ ဗာဒံစေ့ လှော်နဲ့ ဧည့်ခံလေ့ရှိပါတယ်နော်။မော်ရော့ကိုနိုင်ငံရဲ့ အရေးကြီးအခမ်းအနား များမှာဗာဒံစေ့မှုန့်ရောထားတဲ့ နွားနို့ကမပါလျှင်မပြီးပြန်ပါဘူး။ pasanda-style (ခေါ်) … Read more
ကြည့်ရှုသူ ၁၀သိန်းကျော်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဒေါက်ဖိနပ်သံသီချင်းဖြင့် ကပြလိုက်တဲ့ ကလေးငယ် (ရုပ်သံ)
ကြည့်ရှုသူ ၁ဝသိန်းကျော်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဒေါက်ဖိနပ်သံသီချင်းဖြင့် ကပြလိုက်တဲ့ ကလေးငယ် (ရုပ်သံ) ဒီဗွီဒီယိုလေးကတော့ လူထုခေါင်းဆောင် အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီအောင်နိုင်ရေးသီချင်း ဒေါက်ဖိနပ်လျှောက်သံ သီချင်လေးကို လိုက်ပီး ကထားတဲ့ ဗွီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် သရုပ်ဆောင်တတ်လွန်းလို့ အားပေးတဲ့သူတွေလည်း များပြားလာခဲ့ပါတယ်။ ကလေးလေးဖြစ်ပေမယ့် အမေ့ရဲ့မေတ္တာတရားတွေကြောင့် အမေ့ကို ဘယ်လောက်ချစ်ပီး အားပေးနေတယ်ဆိုတာ ဗွီယိုဖိုင်လေးက သက်သေခံနေပါတယ်။ ကလေးငယ်လေးရဲ့ ဗွီယိုလေးကို ကြိုက်တယ်ဆို like and share လေးလုပ်ပါကြပါအုံးနော် Unicode Version ကွညျ့ရှုသူ ၁ဝသိနျးကြျောသှားပွီဖွဈတဲ့ ဒေါကျဖိနပျသံသီခငျြးဖွငျ့ ကပွလိုကျတဲ့ ကလေးငယျ (ရုပျသံ) ဒီဗှီယိုလေးကတော့ လူထုခေါငျးဆောငျ အမဒေျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ဦးဆောငျတဲ့ NLD ပါတီအောငျနိုငျရေးသီခငျြး ဒေါကျဖိနပျလြှောကျသံ သီခငျြလေးကို လိုကျပီး ကထားတဲ့ … Read more
အိမ်ရှင်မများသိသင့်တဲ့ပြန်နွေးမစားသင့်သောအစားအစာများ ပြန်နွှေး မ စား သင့်သည့် အ စားအစာမျာ၁။ ဟင်းနု နွယ်ရွက် ချက်ပြီး သား ဟင်းနု နွယ်ရွက်ကို ပြန်ေွှေးပြီး မ စား သင့်ပါဘူး။ ဘာ လို့လဲဆို တော့ ဟင်းနုနွယ်ရွက်ထဲ မှာ ပါ တဲ့ နို က်ထရိတ် ဓာတ်ဆား ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ချက်ထား တဲ့ ဟင်း နု နွယ်ရွက်ကို နွှေး လိုက်တဲ့ အ ခါ မှာ နိုက်ထ ရိတ် ဓာတ်ဆား က နေ နိုက်ထရစ် အက်စစ် အဖြစ် ပြောင်း လဲသွားပြီး အဲ့ဒီ ပြောင်း လဲ သွား … Read more